ISuduroy, iNes, iHvalba, iNdlu ngaselwandle kunye neentaba - I-Airbnb
ISuduroy, iNes, iHvalba, iNdlu ngaselwandle kunye neentaba
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uKate iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu yam ikwisiqithi esisemazantsi, iSudoroy, ijikelezwe yindalo ebabazekayo enezithuthi zikawonke-wonke kanye ngasemnyango. Uhambo lweyure ezi-2 ngesikhephe ukuya esiqithini, itikiti lokubuya malunga ne-euro eyi-11 kunye ne-euro engama-37 ngemoto, lihle. Uya kuyithanda indlu yam esandula ukulungiswa ehonjiswe ngesitayile kwaye ilula ngeebhedi ezintsha nezitofotofo kunye nembono entle evela kumagumbi amaninzi. Indlu inamagumbi ama-3 amahle kwaye ilungele izibini, izihlobo kunye neentsapho ezinabantwana okanye ezingenabo.
Indlu epholileyo enamaziko abantu aba-4 ekwilali encinci iNes ecaleni kweHvalba. Indlu yindlu eqhelekileyo yaseFaroe esanda kulungiswa ngokupheleleyo. Umgangatho ophantsi unekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-dishwasher, i-oven, ii-hotplates kunye nefriji, igumbi lokudlela, igumbi lokulala eli-1 kunye negumbi lokuhlambela elincinci kodwa elisebenzayo elineshawa. Umgangatho wokuqala unegumbi lokulala eli-1 kunye negumbi lokuhlala elinembono entle neyothusayo phezu kolwandle kunye neentaba. Indlu ilungele abantu aba-4. Zonke iibhedi zintsha kakhulu ezinoomatrasi obutofotofo. Onke amagumbi ahonjiswe ngesitayile kwaye anobuhle. Abantwana bamkelekile endlini, kodwa qaphela ukuba kukho izitephusi ezingenageyithi yokhuseleko kwaye azikho izinto zokudlala zabantwana. Kodwa ndinesitulo esinye somntwana.
Kukho i-wi-fi endlwini. Kukho iTV isitishi sikaFaroe kunye negumbi lokuhlala iTV ehlakaniphile .. Uya kufumana amashiti ebhedi, iitawuli, isepha kunye neshampu endlwini. Ekufikeni kwakho, kuya kubakho iphepha lendlu yangasese, izicubu kunye neetabhu zokuhlamba izitya kodwa kuyafuneka ukuba uzitshintshe ezi zinto ukuba uhlala ixesha elide xa ushiya ukuze uqinisekise izibonelelo ezifanayo kwiindwendwe ezilandelayo. Wamkelekile ukuba usebenzise ikofu, iziqholo njalo njalo ezifumaneka ekhitshini. Kukho umatshini wokuhlamba kunye nefriji kwindawo engaphantsi ukuze isetyenziswe simahla.
Kukho imisebenzi emininzi eSudoroy, kunye nabakhenkethi. Ukutyelela kwidolophu ekuphela kwayo ekwintshona-cala yesiqithi, i-Fámjin, yinto emele ibonwe, kunye nokuhamba ngokulula ukunqumla iintaba ukuya emazantsi ukuya kwidolophu yaseSumba ngamava amahle endalo. Akukho zixhobo zikhethekileyo ezifunekayo ukuhamba ezintabeni, kwaye encotsheni yeentaba imbonakalo yomhlaba ithe tyaba. Kukho iimpawu zamatye (iimfumba zamatye) ezibonisa indlela, kodwa luluvo oluhle ukuthabatha iincwadana ezineendlela zokuhamba ukusuka kwiofisi yabakhenkethi eTvoeroyri ukuze uqiniseke ngendlela.
E-Hvalba, izibuko elidala elikwicala laseNtshona lesiqithi likwafanele ukutyelelwa, kodwa khumbula izihlangu ezilungileyo zokuhla ukuya echwebeni kuba indlela ehlayo ingumnqantsa. Nangona kunjalo, wonke umntu unokululawula uhambo ukuba ukhathalelo oluncinci luyenziwa.
Isitshixo sendlu sizakube sikulungele endlini xa ungena.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nendlu ngexesha lokuhlala kwakho, ungaqhagamshelana no-Elin noJon abahlala esiqithini. Iinombolo zefowuni ziya kusiwa xa ubhukisha.
Ukuba unemibuzo malunga nommandla njlnjl. bonke abamelwane bahle kakhulu kwaye baluncedo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nendlu ngexesha lokuhlala kwakho, ungaqhagamshelana no-Elin noJon abahlala esiq…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hvalba